ယော ကျာ်း စွန့်ပစ် ခံရတဲ့ (၁၇)နှစ် အရွ ယ် မိန်းကလေး ရဲ့ သားလေးကို ဂေဟာမှာ ‌ခေါ်ယူမွေးစား လိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Shwewiki.com
ယော ကျာ်း စွန့်ပစ် ခံရတဲ့ (၁၇)နှစ် အရွ ယ် မိန်းကလေး ရဲ့ သားလေးကို ဂေဟာမှာ ‌ခေါ်ယူမွေးစား လိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
June 8, 2020 By admin Celebrity
နိုင် ငံကျော် အနုပညာရှင်၊ ပရဟိတသမား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့ဘဝကို အများအကျိုးကို သယ်ပိုးရင်းနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက လူမှုအကျိုးပြုပ ရဟိတအသင်းအပြင် “ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာ” ကိုလည်း တည်ထောင်ထားပြီး မိဘနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ ကလေးလေးတွေ ကို သားသမီး အရင်းတွေလို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ခိုင်နှင်းဝေက (၄၅) ရက်သားအရွယ်ရှိတဲ့ သားသားေ လးတစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူမွေးစားဖြစ်ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ်
“Hello! ခိုင်နှင်းဝေ ပရဟိတဂေဟာကပါလား????? ကျမ ကလေးပေးချင်လို့ပါ စတဲ့ ဖုန်းပေါင်း များစွာကို ဖြေနေရတဲ့ ကျွန်မ။ ကလေး ၃၀ ယောက် နဲ့ သူတို့ကိုထိန်းတဲ့ ဆရာမလေးတွေ ပြည့်နေတဲ့ဂေဟာ နေရာ‌ကျဉ်းလေးကို တလှည့် ၊ ‌ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကြောင့် အလှူရှင် နည်းပါး သွားလို့ လျော့သထက်လျော့ လာတဲ့ နို့မှုန့်ဘူးတွေကို တလှည့် စီ ကြည့်ရင်း မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ ငြင်းပယ်လိုက်ရတဲ့ ဖုန်းတွေကြားထဲကမှ ဒီနေ့ ကျမနှလုံးသားရဲ့ ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ ကလေးတယောက်ကို ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများဂေဟာသို့ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် ခေါ်လာခဲ့ ပြန်ပါပြီရှင်”
“အမေက (၁၇)နှစ်၊ အဖေက ပထမ အိမ်ထောင်ရှိနေလို့ နို့မှုန့်ဖိုး တောင် မထောက်ပံ့ဖူး ငြင်းလွှတ်၊ အဘွားဖြစ်သူက ကင်ဆာရောဂါသည်မို့ ဒီ ၄၅ရက်သား ဗုဒ္ဓဟူးသားလေးကို ကျွန်မရဲ့ ရင်ခွင်ဆီ ကို ဘုရားက လက်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်လေသလားလို့ တွေးမိလိုက်ခြင်း မှာပဲ သားငယ်လေးက ကျွန်မမျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ပြုံးပြလေရဲ့ ❤️❤️သားငယ်လေး ကို ခေါ်လာပြီး သားလေးဖွား ဖွား အတွက် ဆန်နဲ့ဆီလဲ လှူခဲ့ သေးတယ်နော်။ မေတ္တာတရားရဲ့ ဓာတ်ကို အသက်ငယ် ပေမယ့် နားလည်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားလေး ကို အမေ နာမည်ပေးဖို့ စဉ်းစား လိုက်ပါဦးမယ် သားလေးရေ” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သံယောဇဉ်တွေ ကို သူမကိုယ်တိုင် ထပ်ရှာရင်း အခုလည်း သံယောဇဉ်ကြိုးေ လးတစ်မျှင်နဲ့ ရစ်ပတ်နေမိ ပြန်ပါပြီ။ သားသားလေး လည်း ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ လက်ထဲမှာ ကောင်းမွ န်စွာကြီးပြင်းပြီး တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုးအတွက် အကျိုးပြုနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
မိုး ရွာပြီး တဲ့ အ ချိန် ဗွက်အိုင်ထဲ မှာ ဆော့ကစားေ န တဲ့ ကလေးငယ် ကို မိခင်ဖြစ်သူက ရိုက်ဖို့ တုတ်ကိုင်ပြီး သွားလိုက် သော အခါ . . .
ပဲခူးေ ဆးရုံကြီး တွင် ကုသမှု ခံယူနေသော စောင့်ကြည့် လူ နာ ၁ ဦး ကွယ်လွန်